စာပေခရီးနီးသလား...(၃) | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ဆောင်းပါး » စာပေခရီးနီးသလား...(၃)
မနီးတဲ့စာပေခရီးထဲမှာ ကဗျာတွေ ကတော်တော် အရေးပါခဲ့တယ်ဆိုတာ ရှေ့ပို့စ်တွေ့မှာရေးခဲ့ပါတယ်.။
ငယ်ငယ် က ကဗျာ မရေးခင်ကတည်းက ကျွန်တော်က စာစီစာကုံးကို သိပ်သန်တယ်.။ ကျောင်းမှာ ငယ်ငယ်
လေးကတည်းက စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေဆို အမြဲတမ်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်.။ ၅ တန်းက စပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာ
မြန်မာစာ ထူးချွန်ဆုတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ ကျောင်း ကိုယ်စားပြုနဲ့ ၈ တန်းအထိ ရခဲ့ပါတယ်.။ မှတ်မှတ်ရရ..
၄ တန်း နှစ်မှာ ကျွန်တော်စာစီစာကုံးနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်မိပါတယ်.။ နိဒါန်း၊စာကိုယ်၊ နိဂုံး ဆိုတဲ့ ဖောမက်ကို
ကြားဖူးရုံတင်ရှိသေးတာပါ.။ စပြီးပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ. ကျီစားသန်က ရန်များ၏ ဆိုတဲ့စီစာကုံးကို နိဒါန်း၊စာကိုယ်၊
နိဂုံးတွေကို ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ပြီး ဖြေခဲ့တယ်..။ အပြင်ထွက်မှာ အမေက ပြောမှ မှားမှန်းသိတယ်. ။ အဲဒီမှာ
ကျွန်တော့် မြန်မာစာခရီးရှည်ကြီး စတာလို့ပြောလို့ရတယ်.။(ခရီးရှည်ဆိုသော်ငြားကျွန်တော့် လာခဲ့ပြီးတဲ့လမ်း
ကတိုတိုလေးပါ..။ ရှေ့မှာ တစ်ဆုံး ရှိသေးတယ်...။ )၅ တန်း နှစ်မှာ ပြိုင်တယ်..။ ၆ တန်းနှစ်မှာ တစ်ခါထပ်ပြိုင်
တယ်. ။ အဲဒီမှာ အတွေ့အကြုံ တော်တော်ရလာပြီ. ။ ၆ တန်းနှစ်မှာ မြို့နယ်အဆင့် ဒုတိယ တစ်ခါရတယ်.။
၇ တန်းနှစ်ကကျွန်တော့်ဘ၀မှာ မြန်မာစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတစ်ခုခုမှတ်သားနိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပါ..။ စာစီစာကုံးဆုပေါင်း
(၆) ဆုတိတိရခဲ့ပါတယ်.. ။ လူက အဲဒီအချိန်မှာ သွေးက စကားပြောနေပြီ.။ ဗီဇကပြူထွက်လာပြီ။ကဗျာတွေ
လည်းရေးချင်လာပြီ...။ သို့သော်ငြား ကဗျာ ကို အဖတ်နာတာကလွဲပြီး..သူ့ရဲ့ ဖောမက်ကိုကောင်းကောင်းမသိ
သေးဘူး.။ ၈ တန်းနှစ်မှာလည်း စာစီစာကုံးဆုရတယ်..။ ၁ ဆုထဲပါ.။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်.။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကိုငြင်းဆိုခဲ့လို့ပါ.။
၉ တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိဘ၀ကို အထောက်အကူပြုမယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုနဲ့တည့်တည့်ကို တိုးခဲ့
ပါတယ်.။ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲပါ.။ မြို့နယ်ပွဲ မှာ ပထမ.၊ခရိုင်ပွဲ မှာ ပထမ. တိုင်းပွဲမှာ ပထမရခဲ့ပြီးမှ.ဗဟိုအ
ဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ.. ကျွန်တော် ပဉ္စမ ရခဲ့ပါတယ်.။ အဲဒီတုန်းက နေပြည်တော်မှာ ပြိုင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး.။ ရန်ကုန်
မှာ ယှဉ်ပြိုင်ရတာပါ..။ အင်မတန်ကြောက်တဲ့ အင်မတန်ပြောရခက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုကျပြီး ကံဆိုးစွာနဲ့ ရှုံးနိမ့်
သွားတာပါ.။ပထမဆုကို လူတစ်ကာ အကုန်ချစ်တဲ့ စူပါဒဂုံ(၁) ကအစ်မ၊ဒုတိယဆုကို ရခိုင်ပြည်နယ်ကအစ်မ၊
တတိယဆုကို စစ်ကိုင်းတိုင်းက အစ်မ.၊(သုံးယောက်စလုံး Girl တွေချည်းပဲ..) အဲဒီပြိုင်ပွဲ ရဲ့ အကျိုးရလဒ်က
ကျွန်တော် လူပရိသတ်ကို လုံးဝ ရှိန်မသွားတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရလာတာပါပဲ.။ နောက်ပိုင်း သီချင်းဆိုပွဲတွေ
ဘာညာရှိရင် ပိုအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အခန်းအနားနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရ
စေပါတယ်.။ လေယူလေသိမ်းကအစ ငြီးငွေ့မှုမရှိအောင်ဘယ်လိုပြောရမယ်.။ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်ရမလဲ ဆို
တာကိုပါ သိလာခဲ့ပါတယ်.။ အဲဒီနောက်ပိုင်း စစ်တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်တဲ့ကျပန်းစကားပြောပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်
အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်. ။ (ဒီမလာခင်ကမှ ဘာသာစကားကနေ မဟာသင်တန်းက အစ်ကိုတွေကို နိုင်လာသေး
စာဆိုတာ အဖတ်များလာရင်ရေးချင်လာတာသဘာဝပါ.။ စာနာနာဖတ်တဲ့သူဟာ စာရေးကောင်း
တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်တယ်. ။ မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်. မိမိရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်ကို ထိရောက်အောင် ဖော်ပြ
နိုင်စွမ်းရှိတယ်.။ အထက်တန်းလွှာမဟုတ်တဲ့ မိဘတွေကြားမှာရှင်သန်လာပေမယ့် ကျွန်တော့် မိဘက ကျွန်
တော့်ဘ၀ အတွက် တစ်သက်စာ အကောင်းဆုံးသော အမွေကိုလေးနှစ်သားကတည်းကပေးထားခဲ့ပါတယ်.။
အဲဒါစာဖတ်ခြင်းပါပဲ.။ဥစ္စာ အမွေ၊ ပစ္စည်းအမွေတွေထက် သာလွန်မြင့်မြတ်ပြီး. ဘ၀ကို အကောင်းဆုံးတည်
ဆောက် ဖို့.။ မိမိကိုယ်ကို အကောင်းအဆိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့၊ အမှားအမှန်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့. ၊တစ်ပါတည်းပါ
ပြီးသားပေါ့.။ဘယ်သူပျက်ပျက် မိမိမပျက်ဖို့..၊ ဘာသာတရားနဲ့ ယှဉ်ပြီးချင့်ချိန်နိုင်ဖို့. ဆိုတာ စာပေကနေရခဲ့
တဲ့အသိတွေက အများဆုံးပေါ့.။ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ကျွန်တော် မြတ်နိုးတဲ့စာပေခရီးလမ်းကတော့ ကျွန်တော်
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အထင်ကရ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၀တ္ထုရှည်တွေအကြောင်းလည်းပြောပါဦးမယ်.။
ကျွန်တော်ပထမနှစ် ဗိုလ်လောင်းဘ၀မှာ ပထမဆုံးဝတ္ထုရှည်ကို စရေးပါတယ်.။ အဲဒီအချိန်တုန်းက .၀တ္ထုတို
တွေကျွန်တော်မရေးသေးပါဘူး.။ အားလုံးသိတဲ့သူ သိပါလိမ့်မယ်.။ စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ပထမနှစ် ဗိုလ်လောင်း
ဘ၀ ဆိုတာ အချိန်အင်မတန်ရှားပါတယ်.။ ဟင် ဒါဆို မင်းက ဘယ်အချိန်သွားရေးသလဲ လို့မေးပါလိမ့်မယ်.။
ကျွန်တော် Academic ချိန်တိုင်းမှာ ၀တ္ထုစာအုပ် အမြဲတမ်းယူသွားပါတယ်.။ စီနီယာတွေအိတ်စစ်ပေမယ့်.
ကျွန်တော်က ကဒ်ထူဗလာစာအုပ်နဲ့ဆိုတော့ မမိဘူးပေါ့ဗျာ.။ အားတဲ့အချိန်.. စာကြည့်တိုက်ချိန် တွေတိုင်းမှာ
နည်းနည်းချင်းစီရေးပါတယ်.။ ၅ လလောက် အင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ. ။ စာမျက်နှာ ၃၈၀ ကျော်တဲ့
၀တ္ထုရှည်တစ်အုပ် ဖြစ်လာပါတယ်.။ နာမည်ပေးဖို့လုပ်တော့ မစဉ်းစားဖြစ်တာနဲ့Untitle6လို့ပေးထားခဲ့ပါ
တယ်.။ (နောက်ပိုင်းတွင် နှင်းခချယ်ရီ လွမ်းပန်းချီ-၁ဖြစ်လာပါတယ်.။) အဲဒီစာအုပ်က အခု ထိကျွန်တော့်အိမ်
မှာရှိပါသေးတယ်.။ အဲဒီတုန်းကတော့ ပုံနှိပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပေမယ့်. ။ နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်တော့ သိပ်မကြိုက်
ဘူး . ။ ဟနေတာလေးတွေရှိသေးတယ်.။ ပထမဆုံးဆိုတော့ တော်တေ်ာများများ လည်းမှားတာပါပါတယ်.။
ဒုတိယတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ နှင်းခချယ်ရီ လွမ်းပန်းချီ(၂) ကို.ဒုတိယနှစ်မှာရေးပါတယ်။ မန္တလေး နောက်ခံ အချစ်
၀တ္ထုပါပဲ.။ အဲဒီစာအုပ်က ကျွန်တော်တို့အောင်စစ်သည်တပ်ခွဲအဆောင်ပြောင်းတဲ့အခါ.. စာအုပ်စင်တွေ
သယ်ရာကနေ ဘယ်သူနဲ့မှားသွားလည်းမသိပဲ . ။ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်.။
ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ နှင်းခချယ်ရီ လွမ်းပန်းချီ(၃) ကတော့..အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့
စိတ်တိုင်းအကျဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်ကလည်းကြာရှည်မခံပါဘူး.။ သုံးနှစ်သုံးမိုး
အခွေလုပ်နေတဲ့ကာလမှာပဲ. Othello အဖွဲ့ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ငှားပြီး ပျောက်ဆုံးသွားပါ
တယ်.။ တော်တော် စိတ်တိုပြီး.. သူ့ကို ထိုးမယ်လုပ်ပါသေးတယ်။ နောက်မှာ ကံကိုသာပုံချပြီး. ။ ခွင့်လွှတ်
လိုက်ရပါတယ်.။ တကယ်ဆိုရင် ဒီစာအုပ်က အစားပြန်ဝယ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာ သူသိသင့်ပါတယ်.။
အဲဒီ နှင်းခ(၃) ကို ကျွန်တော် ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်း တက်နေတုန်းက ပြန်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။ပိုပြီး ပြည့်
စုံသွားပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာက ဘယ်တော့မှာ မျက်နှာသာမပေးတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်. မပျော်နိုင်ပါ
ဘူး.။ တပ်ရှိရာ နေပြည်တော်စာတိုက်ကနေ.. ပြင်ဦးလွင်က အမေ့ဆီ ပါဆယ်နဲ့ ပို့ရာမှာ အကြောင်းကြား
လာမယူ ဆိုတဲ့စာတမ်းအနီနဲ့ စာတိုက်ကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်.။ မိုးရေတွေစိုလို့.. မင်တွေပျံ့ကာ ဖတ်မရ
တော့ပါဘူး.။အဲဒီစာအုပ်ကို ခုထိအိမ်မှာသိမ်းထားပါသေးတယ်. ။ ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး Repair လုပ်ပြီး
ပုံနှိပ်ဦးမှာပါ.။ ထုတ်ဝေနိုင်သည်ဖြစ်စေ . မထုတ်ဝေနိုင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ကူးရှိပါတယ်.။
ကိုမောင်မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ကွန်မန့်ဘောက်မှာရေးသွားတဲ့အတွက် . ကဗျာရေးနည်း ကျူတိုလေးတွေ
အရေးများတဲ့ ၄လုံးစပ်ကဗျာ ရဲ့ ၄-၃-၂ ပုံစံပါ..။
၁။ ကဗျာရေး____၊ စိတ်ရှင်း_____
၂။ မြို့ပြင်ဦး___၊ ပန်းစုံ___
၃။ အချိန်ကြာ_____၊ ရက်လ ____လည်း
ဥပမာတွေက သိပ်လွယ်နေလား မသိဘူး.။ လွယ်ပေမယ့် ဒီအတိုင်းရေးထားရင် အတွေးချော်သွားနိုင်ပါ
၁။ ကဗျာရေးရာ၊ စိတ်ရှင်းကာ
ရာ ကလေး လုံးမြောက် ၊ ကာ က သုံးလုံးမြောက်နဲ့. အောက်က သာ က ၂ လုံးမြောက်ဖြစ်လို့..
၄-၃-၂ ပုံစံလို့ ခေါ်တာပါ.။
နောက်တစ်ချိုးကူးရင်ကျတော့ ၂ လုံးဆင်ထားတဲ့ ပါဒကို ငါးလုံးအစား လေးလုံးပြန်ပြောင်းရတယ်.။
ပြီးတော့ အဲဒီ ၂ လုံးပါဒ ရဲ့ လေးလုံးမြောက်က ၄-၃-၂ ရဲ့ အစ လေးလုံးမြောက်ကာရန်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရော.။
ကဗျာရေးရာ ၊ စိတ်ရှင်းကာဖြင့် (ဖြင့်က လေးလုံးစပ်ဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်တာပါ.။)
ကြည်သာရွှင်ပျ ၊ ကာရန်လှအောင် (ပျ ကို ကာရံ အသစ် ယူလိုက်ပါတယ်.။)
ဒီလောက်ဆိုရင် အစမ်းလေးတွေရေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်.။ ဒါက ကဗျာတွေမှာ အခြေခံပါပဲ..။
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 10:33 AM
Posted by မိုးသက် at 10:33 AM Read more
mstint March 22, 2012 at 5:31 PM
စာပေခရီးနီးသလား ၂ နဲ့ ၃ ဖတ်သွားတယ် မေမြို့မိုးရေ။
ကိုယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီးသားစာပေကို ဒီထက်မက တိုးပွား အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ကွယ်။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 22, 2012 at 8:39 PM
ပညာသစ်လေးတွေရလို့ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ
blackroze March 22, 2012 at 11:51 PM
Thiha Lu Lin March 23, 2012 at 8:46 AM
မေမြို့မိုးက အများကြီး လေ့လာစုဆောင်းထားတယ်။ မိုက်တယ်ကွာ။ :)
စံပယ်ချို March 30, 2012 at 9:49 AM
မြန်မာစာ ၄၀ ကမတက်ခဲ့ဘူး(ကြီးဒေါ်ကျောင်းအုပ်ကြီး)
ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင် (Tag )